फैट - हाम्रो मनपर्ने भान्साको बर्तनको सबैभन्दा खराब शत्रु, अपवाद र माइक्रोवेव ओवन होइन। हरेक गृहिणी प्राय: कसरी माइक्रोवेव ओवन भित्र फैट बूंद र स्टेल स्पटहरू धोने कसरी?
प्रदूषणबाट माइक्रोवेव सफा गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, तर तिनीहरू सबै सुगम वा प्रभावकारी छैनन्। हामी सबै जान्दछन् कि एक बहुमुखी माइक्रोवेव ओवन रोजमर्राको जीवनमा धेरै उपयोगी छ, किनभने यसले विभिन्न प्रकारका विभिन्न व्यञ्जनहरू पकाउन सक्दछ: जनावरहरू सेतोबाट केकबाट।
तर हामी विषयबाट टाढा पुगौं, कसरी माइक्रोवेव धोएर भित्रको विकल्पहरू विचार गर्नुहोस्।
विशेष स्टोरको अलमारिकामा, हामी स्प्रे, पाउडर र विभिन्न तरल साबुन जस्ता सफा उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं। यद्यपि, यो यकिन यो उपाय प्रभावकारी बनाउन को लागी, तपाइँ यसलाई खरिद गर्न र यसको प्रयास गर्न आवश्यक छ। ठूलो रकममा पैसा खर्च गर्छ, प्रायः धेरै खरीदारहरू तिनीहरूमा निराश छन्, वांछित नतिजा प्राप्त नगरेको छैन। र फेरि तिनीहरू माइक माइक्रोवे सफा गर्ने तरिका खोजिरहेका छन्।
त्यहाँ आत्म-सफाई प्रकार्यको साथ माइक्रोवेव ओवनहरू छन्। यस्तो माइक्रोवेवहरूका लागि, केवल एक विशेष पानी छेद डाल्नुहोस् र इच्छित बटन थिच्नुहोस्। एक भाप भाप संग, माइक्रोवेव फ्याट ड्रप पिघ्नु हुनेछ, र तपाईले नै नैपकिनको साथ भित्र भित्रै घुमाउनुपर्छ। यो टिप्पणिहरु लायक छ कि यस्तो माइक्रोवेव ओवन एकदम महंगी छ। प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफैलाई निर्णय गर्न आवश्यक छ - जसले माइक्रोवेव ओवन उनको लागि उत्तम छ।
त्यहाँ माइक्रोव्याभ सफा गर्न धेरै "घर" तरिकाहरू छन्।
सोडा र पानी। गहिरो कपमा, पानी पकाउनुहोस्, एक चम्मचको सोडा राख्नुहोस् र यसलाई माइक्रोनवेमा 15 मिनेटको लागि राख्नुहोस्। त्यसपछि एक नैपकिनको साथ माइक्रोवेवको भित्ताबाट स्टोरी वोसोलाई राम्ररी हटाउनुहोस्। नींबू एसिडको साथ सोडा बदल्नुहोस् वा लियोनका टुक्राहरू।
सुन्तला पिक म माइक्रोवेव भित्र पस्नु अघि, नारंगी, वा सट्टा, यसबाट क्रस्ट तयार पार्नुहोस्। त्यसपछि पानीको साथ कपमा क्रस्ट राख्नुहोस् र 1 बाटोमा वर्णन गरिएको एउटै कुरा गर्नुहोस्। त्यसै गरी, तपाईं माइक्रोवेवबाट अवांछित गंधबाट हटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो स्वादको लागि अरोमेटिक तेल छान्नुहोस्, एक कप पानीमा थप्नुहोस् र थोडा फोच गर्नुहोस्। थप थप ड्रपहरू तपाईले थप्नुहुन्छ, बलियो स्वाद तपाईंको माइक्रोवेवबाट हुनेछ।
घरेलू साबुन। सबैलाई थाहा छ कि घरको साबुनले गाई गाँस्न गाह्रो हुन्छ, तर भित्र माइक्रोवेव सफा गर्न, तपाईलाई पहिले राम्रोसँग फोम गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि पनि दीवारहरूमा लागू हुन्छ र 30 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्, पछि स्पंज प्रयोग गरेर न्यानो पानी संग साबुन सफा गर्नुहोस्।
4 बाटो। सबैभन्दा प्रभावकारी
सरल र सबै भन्दा प्रभावकारी तरिका हो, निस्सन्देह, विशेष आवरण खरिद गर्न को लागी बोसो को भित्ता को ओवन को पर्खालहरुमा स्प्रे गर्न को लागी अनुमति छैन।
एक माइक्रोवेव धोनु भन्दा स्वाभाविक रूप देखि, गृहिणी छनौट गर्दछ। सबै माइक्रोभाइभहरू अलग छन्, प्रत्येकलाई आफ्नै सफ्टवेयर एजेन्सी चाहिन्छ, र यो कसरी हुन्छ - यो तपाईंसँग छ।
Asus X555LD को अवलोकन: वर्णन, विशेषताहरू र समीक्षाहरू
उत्तम वायरलेस वैक्यूम क्लीनर: मूल्याङ्कन
बुल्गारिया, वा कोण चिनारी
"स्मार्ट" एप्पलबाट हेर्दछ। तिनीहरूले के अवसरहरू छन्?
इयान Makelhinni: अभिनेता बारेमा छोटकरीमा
बुनना कसरी सिक्न
काला सागर मा सबै भन्दा लोकप्रिय होटल "सबै समावेशी" (रूस)
केशको योजनाहरू: चरण-दर-चरण निर्देशन, सिफारिसहरू र प्रतिक्रियाहरू
दानाको कफी मिसिन: ग्राहक समीक्षा। म घर एस्प्रेसो मिसिन, एक दानाको किन्न गर्नुपर्छ?
महिला फैशन घाम 2013
तिनीहरूलाई लागि Primrose फूल र हेरविचार
सही मैनीक्योर को रहस्य: कसरी आफ्नो नङ रंग गर्न
सुनगाभा सेन्ट पीटर्सबर्ग - यो एक फूल हो